Tanzania Oo U Yeeratay Safiirka Kenya Si Ay Wax Uga Waydiiso Hadal “Isir Beegsi Ah” Oo Xildhibaan Ka Soo Yeedhay | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Tanzania Oo U Yeeratay Safiirka Kenya Si Ay Wax Uga Waydiiso Hadal “Isir Beegsi Ah” Oo Xildhibaan Ka Soo Yeedhay
Ra’iisulwasaaraha Tanzania ayaa la kulmay safiirka Kenya u fadhiya dalkiisa ka dib markii uu u yeeray si uu faahfaahin uga bixiyo hadal ka soo yeeray xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya, kaas oo sheegay in ay dalkiisa isaga baxaan ganacsatada reer Tanzania.
Xildhibaan Charles Njagua Kanyi ayaa yiri “reer Tanzania iyo reer Uganda ganacsiganagii ayay la wareegeen, arrintaasina way nasoo kartay.” Ka dibna wuxuu intaas ku daray waa la garaaci doonaa haddii aysan tagin.
Ka dib kulankii ay wada yeesheen Kassim Majaliwa iyo danjire Dan Kazungu, Mudane Majaliwa ayaa sheegay in labada dal ay yihiin saaxiibbo uuna u xaqiijiyay in hadalkaas uusan ka imaan dawladda Kenya.
Intii ay doodda baarlamaanku socotayna, guddoomiyaha baarlamaanka ayaa dalbaday in dawladda Kenya ay iska fogayso hadalkaas.
Job Ndugai ayaa yiri “haddii Tanzanian-ka la garaaco Kenyanku qureexda ayay halkaas nagu arki doonaan” hadal kaas oo uu ula jeedo waan aarsan doonnaa.
Hoggaamiyaha mucaaradka Tanzania Freeman Mbowe ayaa sheegay in hadalkaas aan la iska indho tiri karin.
“Hadallada isir nacaybka ah waa in aan cambaaraynaa. Horay baan saamaynta dabeecadahaas oo kale ugu aragnay Koonfur Afrika muwaadiniintannada ayaana lagu laayay, dawladda Kenya waa in ay wax ka qabataa arrintaas.” ayuu yiri Mbowe.